Emazweni amaningi aseYurophu kukhona uphawu kuze kube sekupheleni kwesizini noma ngaphambi amaholide enkulu cishe njalo esitolo, ofundeka kanje: «Alennus», «Yamadivayisi», okusho "Sales". Kuyinto ayihlukile neze futhi Finland. Ungathengi labetibambile lapha kaningi, futhi amanani ephansi kakhulu kunalokho kwamanye amazwe.
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe okuthiwa "izinsuku osangene 'kwahlelwa kabili ngonyaka, esitolo mnyango Stockmann. Ngo-October kuya ku-April unyaka ngamunye, Stockmann kunesithembiso yokuthengisa ayo. Kulezi zinsuku, izinkulungwane abathengi abafuna ukuthenga imikhiqizo emihle izinga ngenani encishisiwe, vakashela lesi sitolo omkhulu.
Enye chain iimfesi, ukuhlela yokuthengisa eFinland, iyona Sokos. amasu awuthanda kakhulu ukudayiswa "3 + 1", okungukuthi, umuntu wathenga izinto ezintathu, yesine iphiwa isipho.
Ukuhlukanisa Phakathi 2 izaphulelo enkulu kwesizini e Finland: ihlobo nobusika.
Isizini ebusika iqala ngokushesha ngemuva kokuphela amaholidi kaKhisimusi, cishe kusukela ngo-December 27-28. Ayikho nakanjani Ukusetha usuku isizini - zonke esitolo ekhetha usuku. Izitolo eziningi, ngezinhloso zokumaketha, baqala understate amanani kanye sigubhu, ngakho abathengi ngaphezulu, ngisho phakathi no-December. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi New Year kanye Christmas Decor, itafula tableware iholide, Christmas imihlobiso namathoyizi. Yiqiniso, isaphulelo kungase kungabi omkhulu, kodwa njengoba besho: trifle, kodwa nice. Nakuba amanani ezinsukwini zika yokuthengisa eFinland futhi ngezinye izikhathi ukufinyelela angu-30.
Njengoba kahle ungagcina kule nkathi amakha izimonyo. Ngokuvamile amanani uncipha cishe amaphesenti angu-50.
Kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu ebusika, kuncike kakhulu ku-izingubo yokuthengisa. EFinland, ngesikhathi seqhwa, nesithwathwa, abandayo izaphulelo ebusika ungathenga ukukhanya, demi-inkathi izingubo, kunalokho, esikhathini yezimvula amanani kakhulu ziyancipha ngoba ezifudumele jackets ebusika, ski kanye snowboards.
Njengoba ubuchwepheshe, akunakwenzeka ukuba ukuthenga nge izaphulelo, njengoba electronics entsha, imishini computer, izinto zasendlini, isithombe, ividiyo futhi imishini elalelwayo kuyabiza kakhulu engaphezu kwengu-eRussia. Kodwa imodeli ngonyaka odlule zingathengwa ngamanani ngempela kunengqondo.
Summer ukudayiswa isizini iqala ngaphambi iholidi yenkolo Juhannus ngasekupheleni kuka June. Ngesikhathi lapho yokuthengisa eFinland, fashionista zanamuhla kusukela emakhoneni eziningi zomhlaba zithuthelekela lapha ukuthenga izingubo ezivela ehlobo amaqoqo, imigexo, izinto eziyizikhumbuzo izimpahla zemidlalo nokuningi.
Ngaphezu njalo ngonyaka isigqebhezana zonyaka, izitolo Finnish uhlele iyiphi ukukhuphula kanye Izipesheli. Isikhathi esining impela ungathola ezitolo yokuthengisa nezicathulo, isembatho izesekeli. Ilindele lamukela izimpahla ezintsha, abanikazi suka intengo ukudayisa izinsalela kungenzeka. Nakuba eminyakeni yamuva, izitolo eziningi waqala abakopelayo futhi ukumemezela izaphulelo kanye ukukhushulwa lapho ngempela. Kodwa ngokuyisisekelo, uma umnyango noma ifasitela esitolo amaphosta kuhlobisa «Ale» «Alennus» noma «Tarjous», angene ngaphakathi ngesibindi, uku lucky namuhla, futhi uthola umkhiqizo enkulu izinga ngenani ehlisiwe.
Futhi njalo kukhona yokuthengisa eFinland ngesikhathi sokuvalwa esitolo, ezihambayo noma ngaphambi ukulungisa.
Boa - kuyinto Chic
Bomber abesifazane: yini okufanele uyigqoke? jackets Trendy kwabesifazane
Reima - ibhantshi demi: izithombe kanye nokubuyekeza amakhasimende